Sheekada Filimka Gully Boy: Ranveer iyo Alia fariinta ay doorteen waa mid heer sare ah – Filimside.net
Sheekada Filimka Gully Boy: Ranveer iyo Alia fariinta ay doorteen waa mid heer sare ah
February 14, 2019 Zakarie Abdi
Tirinta heesaha Raabka dunida meelo kala duwan ayaa laga xiiseeyaa ama laga dhageestaa sidoo kalena waxaa jiraan xirfadlayaal caan ku noqdeen heesaha Raabka oo maanta miisaan ku leh fanka Muusigada. Inta badan wadooyinka ayaa lagu tirin jiray marka ay aqoonsi heleena fanka Muusigada kaalin muuqato ayay ku yeesheen.
Dhanka Hindiya marka fiirino caan kama ahan heesaha Raabka laakiin waxaa jiraan labo wiil Divine iyo Naezy oo tirinta heesaha Raabka wadooyinka Mumbai ka bilaabeen ilaa ay aqoonsi ku heleen xirfadooda.
Sidaa darteed Director Zoya Akhtar filimkeeda Gully Boy dhinac ahaan wuxuu ku saleesan yahay sida Divine iyo Naezy fanka muusigada Hindiya dhanka Raabka ugu soo kordhiyeen waxaana hadal heynta filimkan sare usii qaadeen in Ranveer Singh iyo Alia Bhatt aqbaleen fariin noocaan ah inay hogaamiye ka noqdaan.
Jilaayaasha Filimkan: Ranveer Singh, Alia Bhatt, Siddhant Chaturvedi, Vijay Raaz, Vijay Varma
Waqtiga uu soconaayo: 2-saac iyo 36-daqiiqo
Fariinta Filimka Gully Boy Oo Kooban: Waa fariin ka hadleyso wiil ku nool guryaha carshaanta Mumbai kuna jiro nolosha ugu hooseyso sida ay xirfadiisa tirinta dhanka Raab-ka noloshiisa u badaleyso iyo dhibaatooyinka uu la kulmaayo.
Murad (Ranveer Singh) waa wiil arday ah oo Kuleen dhigto kuna nool guryaha Mumbai ugu liitaan ee carshaanta ah xaafada isi saarka ah ee lagu magacaabo Dharavi. Murad (Ranveer Singh) wuxuu jecel yahay gabadha kartida badan Safeena (Alia Bhatt) ee ardayada caafimaadka barato waxayna kasoo jeedaa qoys Muslim ah oo aad u ad adag.
Murad (Ranveer Singh) nolosha gurigiisa ma xasiloono waayo aabihiis Shakir (Vijay Raaz) wuxuu yeelanaa xaas labaad taasina waxay qalbi jab weyn ku riddee Murad hooyadiis Razia (Amruta Subhash).
Maalin maal maha ka mid ah Murad kuleej-kiisa waxaa heeso raab ah ka qaaday heesaaga caanka ah MC Sher (Siddhant Chaturvedi). Murad wuu ka helaa bandhigan sidoo kalena waligiis wuu xiiseen jiray tirinta heesaha Raabka ah.
MC Sher (Siddhant Chaturvedi) maalin wuxuu ardayda Kuleej-ka ka dalbanaa inay la kulmaan iskana soo saaraan qofkii jecel inuu heesaha Raabka heer ka gaaro isla markiiba Murad ayaa dadka kasoo dhex baxaayo oo arinkaan u arko fursad isaga u gaar ah.
MC Sher (Siddhant Chaturvedi) wuxuu ka helaa dadaalka iyo geesinimada uu Murad leeyahay wuxuuna ku dhiiri galinaa tirinta Raabka inuu si wacan u barto dadkana ka dhex tiriyo. Murad marka kowaad arinkan wuu ka cabsanaa balse marka uu hal bandhig dadka hortooda hees Raab ah ka tiriyo oo dadka dhan u wada sacabo tumaan wuxuu helaa kalsoonidii uu u baahnaa.
Sidoo kalena MC Sher (Siddhant Chaturvedi) Video ayuu ka duubaa Murad taasi oo meel walbo laga sii deenayo wuxuuna Murad Mumbai ka noqonaa qof caan ah.
Laakiin Murad masii wadan karo heesaha Raabka inuu heer ka gaaro waayo aabihiis ayaa lug ka jabaayo wuxuuna ku wareejinaa shaqada uu qaban jiray oo ah darawalnimo. Sidoo kalena madaama uu yahay qof bulshada Mumbai dabaqadeeda ugu hooseyso kasoo jeedo wuxuu la kulmaa naceyb dabaqada sare ah oo diidan inuu heesaa Raabka tiriyo caan ah inuu noqdo.
Haddaba filimka Gully Boy qaybihiisa dambe waxaa loo daawan doonaa sida Murad dhib walbo xal ugu helaayo, sida ay Safeena (Alia Bhat) garab u siineyso iyo ugu dambeyntii sida uu ku noqonaayo fanaanka tirinta heesaha Raabka looga haray oo magaciisa Mumbai ka talaabayo ilaa daafaha caalamka gaarayo.
Maxaa Laga Yiri Fariinta Filimka Gully Boy:
Reema Kagti iyo Zoya Akhtar waxay qoreen sheeko Raab oo ruux leh waayo doorka Murad si cajiib badan ayaa loo qoray iyo dadka kale ee noloshiisa ku hareereesan. Waxayna ku guuleesteen in sheekada Raab kaliya aysan diirada saarin balse qiiro badan leedahay sidoo kalena arimo nolosha ka jiraan oo waaqici ah sheekada lagu dabaqay waxaana arimahaas ka mid ah faqriga, guurka faraha badan ee masuuliyada ka muuqanin, dambiyada caruurta laga galo iyo kala qeybsanaanta bulshada ka dhex jirto.
Sidaa darteed Zoya Akhtar si qurux badan oo saameyn adag leh ayay filimkan u agaasintay waana mid ka mid ah aflaanta fariimaha waaqiciga xambaarsan kuwooda ugu wanaagsan qaabka sheekada loo dhigay awgeed oo sahlan qof walbo fahmi karo sidoo kalena dareen qiiro badan xambaarsan.
Bandhiga Jilaayaasha: Ranveer Singh maba ahan atoorihii aan arki jirnay kani waa wiil yar oo fariinta loo idmaday 100% kasoo dhalaalay sidoo kalena wuxuu muujiyay inuu yahay atooraha filim sameeyayaasha loogu tala galay micnaha doorkii ay doonaan u dhiiban karaan haddana aanan ku fashilmeyn!
Run ahaantii doorka uu jilaayo Murad wuxuu Ranveer ka weyn yahay 10-sano haddana lagama dareemayo waayo wiil yar oo dhibaato heesato si sax ahna u jilay. Waa hubaal in Ranveer abaal marino badan iyo aqoonsi dheeraad ah inuu filimka Gully Boy ku heli doono.
Alia Bhatt inaba caadi ma ahan doorkeeda adag ee saameynta xoogan leh waxaa fiicneyd in muuqaal ahaan shaashada ku badnaato laakiin inta ay filimkan ku leedahay ayaaba u dhigmato gabi ahaanba shaashada inay ku jirto min bilaaw ilaa dhamaad oo kale.
Siddhant Chaturvedi door weyn ayuu ka qaatay filimkan weliba halka saac hore isaga ayaaba hogaanka u haayo Ranveer Singh dhanka heesaha iyo sida dadka loola fal galo sidaa darteed door muuqdo oo qof walbo xasuusan doono ayaa la siiyay.
Muxuu Ku Wanaagsan Yahay Filimka Gully Boy:
Doorka Ranveer Singh waa waxa ugu weyn filimkan loo daawanayo.
Qaabka fariintiisa Raabka loo dhigay oo qiiro badan iyo nolosha dhabta ah arimo taabanayo.
Alia Bhatt saameynteeda adag iyo sida ay Ranveer iskula jaan qaadeen
Muuqaalada filimkan iyo goobaha lagu duubay oo waaqici ah waa kuwo il qabad ah.
Kaliya waxaa fiicneyd in waqtiga uu soconaayo 2-saac iyo 36-daqiiqo laga yareeyo ugu yaraan 15-daqiiqo ama 20-daqiiqo weliba qaybaha dambe.
Qiimeynta Fariinta Filimka Gully Boy: 4/5 (Afar xidig)
Gunaanad: Gully Boy waa filim fariin waaqici ah xambaarsan hab ganacsi ahna loo dhigay una dheer tahay inuu qiiro badan yahay iyo bandhiga hogaamiyaasha intaas waxay ka caawin doontaa filimkan in dhalinyarada iyo reer magaalka siweyn u daawan doonaan kani waa mid si sahlan guul weyn ku gaari doono.
Fadlan hoos ka daawo goos gooska filimka Gully Boy oo amaan weyn ka helaayo kuwa filimada Bollywood-ka falanqeeyaan:
Waxaa Aqrisay 807